जिब्राल्टरको रक भ्रमण गर्नुहोस् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | जिब्राल्टर, मार्गदर्शकहरू
के तपाईंलाई यो विचार मनपर्‍यो? यो चट्टान क्र्याग यो अंग्रेजीको हातमा छ एक लामो समय को लागी तर संसार भर बाट उत्सुक पर्यटकहरु प्राप्त गर्दछ। चट्टान मोनोलिथिक चट्टानहरूको प्रमोन्ट्री बाहेक अरू केही होइन जुन करिब २०० मिलियन वर्ष अघि गठन भएको थियो, जब दुई टेक्टोनिक प्लेटहरू आपसमा ठोकरिए। बैठकले भूमध्य बेसिनलाई पनि आकार दियो, त्यसपछि सालिन ताल।
आज यसको भूगोल धेरै जसो प्रकृति रिजर्व हो र यो युरोपको यस क्षेत्रमा अनौंठो मनोरञ्जन स्थल हो यसले यसको पर्यटन प्रस्तावमा प्रकृति र इतिहासलाई जोड्दछ।
1 एल पेन
2 जिब्राल्टरमा कसरी पुग्ने
3 जिब्राल्टर मा के यात्रा गर्ने
चट्टान यो एक Sandy isthmus द्वारा Iberian प्रायद्वीप संग जोडिएको छ जुन एकै समय एक च्यानल द्वारा काटिएको छ। यो चूनढुंगा हो र यो उचाई को बारे मा 426२XNUMX मीटर पुगेको छ। १ XNUMX औं शताब्दीको सुरूदेखि नै यो बेलाइतको हातमा पर्‍यो, यो ताज स्पेनी उत्तराधिकारको युद्ध पछि लाग्यो।
हामीले सुरुमा भनेका थियौं यो दुई टेक्टोनिक प्लेटहरू, अफ्रिकी र युरेसियनको टक्कर पछि गठन भएको हो। त्यस समयमा भूमध्यसागर ताल पनि जुन जुरासिक कालको अवधिमा बनेको थियो र सुख्खा भयो र पछि मात्र एट्लान्टिकको पानी खाली बेसिनमा डुबे, भूमध्यसागरलाई आकार दिन यो समुद्री जलमार्गबाट ​​बग्यो जुन हामीलाई आज थाहा छ।
त्यहाँ चट्टान र एक स्ट्रिट छ, तर चट्टान एक प्रायद्वीप बनाउँछ जुन स्ट्रेटमा बाहिर जान्छ स्पेनको दक्षिणी तटमा अवस्थित यस साइटका दृश्यहरू शानदार छन्, यदि कुनै भू-विज्ञान जान्छ र चट्टानहरूको व्यस्त इतिहास जान्छ भने।
यी चट्टानहरूको संरचना थपियो हावा र पानीको क्षरणले गुफाओंलाई आकार दिएको छ, एक सय को बारेमा, केहि अधिक र केहि कम छैन। र ती मध्ये धेरै पर्यटक आकर्षण हो।
जिब्राल्टरमा कसरी पुग्ने
तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ डु boat्गा, प्लेन, सडक वा ट्रेन द्वारा। त्यहाँ पक्कै पनि इ England्ल्यान्डबाट नियमित हवाई सेवा छ। उडानहरू ब्रिटिश एयरवेज, ईजीजेट, मोनार्क एयरलाइन्स र रोयल एयर मार्क द्वारा हुन्। यदि तपाईं स्पेनमा हुनुहुन्छ भने तपाईं जेरेज, सेभिल वा मलागामा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट एक घण्टा र आधा भन्दा बढीको पैदल यात्रामा यात्रा गर्नुहोस्।
स्थानीय एयरपोर्ट पोर्टबाट केवल पाँच मिनेट ड्राइभमा छ। पोर्टको बारेमा कुरा गर्दै तपाईं क्रूजबाट चट्टानमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन्: सागा क्रूज, एचएएल, पी एन्ड ओ, ग्र्यान्क सर्कल क्रूज लाइन, रीजेन्ट सेभेन सीस, उदाहरणका लागि। तपाईं स्पेन, फ्रान्स र इ England्ग्ल्याण्डबाट पनि रेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं म्याड्रिडमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं अल्तारिया लिनुहुन्छ, रातमा, अल्जिएरसतिर जाँदै। यो ट्रेनको पहिलो कक्षा र दोस्रो कक्षा छ।
एक पटक अल्जेरिसमा तपाईं बस स्टेशन लिनु हुन्छ रेल स्टेशनको अगाडि, जुन ला लाईनाको लागि हरेक आधा घण्टा छोड्छ, जुन जिब्रल्टरसँग स्पेनीको सीमा हो। आधा घण्टा गणना गर्नुहोस् .. त्यहाँबाट, किनकि तपाईं हिंड्न क्रस गर्नुहुन्छ। धेरै सजीलो!
कागजातहरूको सन्दर्भमा, यदि तपाईं एक यूरोपीयन नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई केवल एक पहिचान कार्ड चाहिन्छ तर यदि तपाईं होईन, तपाईं एक हुनु पर्छ मान्य पासपोर्ट। सोच्नुहोस् कि यदि तपाईंलाई युनाइटेड किंगडममा प्रवेश गर्न भिसा चाहिएको छ भने, तपाईंलाई जिब्राल्टरमा पैदल यात्रा गर्न आवश्यक पर्नेछ।
जिब्राल्टर मा के यात्रा गर्ने
सत्य यो हो कि यो धेरै सानो क्षेत्र हो र तपाईं सजिलै यसलाई पैदल अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छकम्तिमा शहर र रक। किनारा बाट केन्द्र मा पैदल 20 मिनेट छउदाहरण को लागी, यदि तपाइँ नेचर रिजर्भको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने यसले केहि लामो समय लिन सक्दछ। सबैभन्दा आसीन लागि तपाईं सँधै ट्याक्सी वा केबलवे लिन सक्नुहुनेछ। ट्याक्सीहरूले टुर गाइडको रूपमा कार्य गर्न सक्दछन् र आफ्नै टुरहरू पनि प्रस्ताव गर्न सक्दछन्।
केबलवे १ 1966 .XNUMX देखि सञ्चालनमा छ र महान दृश्यहरूको आनन्द लिन तपाईंलाई रकको शीर्षमा लैजान्छ। आधार मा स्टेशन भव्य परेड मा स्थित छ, शहर को दक्षिणी अन्त मा र बोटानिकल गार्डन को छेउमा। चट्टानमा सार्वजनिक बस पनि चल्छ.
La जिब्राल्टर नेचर रिजर्व यो रकको माथिल्लो क्षेत्रमा छ। तपाईले युरोप, अफ्रिका, एट्लान्टिक, भूमध्यसागर। याद गर्नुहोस् कि उचाई 426२XNUMX मीटर छ। यहाँबाट तपाईं एक टुरमा जान सक्नुहुन्छ र केहि सबैभन्दा लोकप्रिय गुफाहरू जस्तै भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सान मिगुएलको गुफाजस मध्ये यो सँधै भनेको छ कि यो अथाह छ र यो युरोपसंग जोड्दछ। सत्य यो हो कि यसमा मुख्य पात्रको रूपमा धेरै कथाहरू छन्, यो दोस्रो युद्धमा पनि अस्पताल नै थियो र यसका भूमिगत कक्षहरू सुन्दर छन्।
क्याथेड्रल यी कक्षाहरूमध्ये एक हो र यो कन्सर्ट र ब्याले ग्यालाहरूका लागि ओडिटोरियमको रूपमा सार्वजनिक रूपमा खुला छ किनकि यसको क्षमता 600०० व्यक्तिको छ। अर्को गुफा हो Gornham गुफा, न्यान्डरथल्सको अन्तिम हौंन्स हो भनेर चिनिन्छ। त्यतिबेला यो समुद्री तटबाट केवल पाँच किलोमिटर जति दूरीमा थियो र १ 1907 ०XNUMX मा पत्ता लागेको थियो। एउटा अति मूल्यवान आश्चर्य।
अर्को तर्फ पनि छन् सुरुieको टनेलहरू, १rid औं शताब्दीको अन्तदेखि कोरीडोरहरूको एक चक्रव्यूह नेटवर्क र यो एक रक्षा प्रणाली को हिस्सा थियो।
ठूलो घेराबन्दी रक मा १ the नम्बर घेराबन्दी थियो, स्पेनी र फ्रान्सेली क्षेत्र फिर्ता प्राप्त गर्न को लागी अर्को प्रयास। यो जुलाई १ 14 to देखि फेब्रुअरी १1779 सम्म रहे, चार बर्षमा। आजको अंश यी ग्यालरी र कोरीडोरहरू सार्वजनिक गर्न खुला छन्: कूल .०० मिटर र त्यहाँ केहि प्वालहरू छन् जसले स्पेनको महान विचार प्रदान गर्दछ, इस्टेमस स्वयं, र खाडी। यो इतिहास को माध्यम बाट पैदल यात्रा हो।
अन्तमा, रोमीहरू मात्र होइन, अ English्ग्रेजी वा स्पेनिशहरू पनि यता घुम्न थाले। अरबहरूले पनि गरे। र ती छोटो थिएनन् तर 701०१ वर्ष! ती दिनहरुबाट एक किल्ला भनिन्छ ११ औं शताब्दीबाट मोरीश महल। पुरानो टोरे डेल होमेनाजे मोर्टार र पुरानो इँटाले बनेको छ तर अझैसम्म अग्लो छ, शताब्दीहरू बित्दै जान अस्वीकार गर्दै। जब तपाईं यसको भ्रमण गर्नुहुन्छ तपाईंले धेरै कथाहरू सुन्नुहुनेछ र यो स t्केतमा थियो कि अ English्ग्रेजीले १ 1704०XNUMX मा राज्यको झण्डा खडा गरे ताकि यसलाई न त फेरि तल झार्न।
अन्तमा, एक सिफारिश पैदल: तथाकथित भूमध्यसागरको चरणहरू। यो एक छ १1400०० मिटर दौड धेरै कठिन जुन एक घण्टा र आधा दुई र आधा घण्टा देखि लिन्छ। यो बिहान सबेरै सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ, विशेष गरी यी गर्मी महिनाहरूमा, वा जब घाम छायाको लागि खस्ने छ। वसन्त routeतुमा मार्ग फूलले भरिएको हुन्छ र यो एक सौन्दर्य हो।
यो पुर्जा डे लस जुडोसबाट नेचुरल रिजर्वको दक्षिणपट्टि १ 180० मिटर उचाईमा ओहारा ब्याट्रीमा 419१ meters मिटर उचाईमा चट्टानको माथि पुग्छ।
हेराइहरू रमाईलोको रूपमा केहि हुन् र तपाईं केही भ्रमण गर्ने अवसर लिन सक्नुहुन्छ गुफाहरु अधिक, एक पटक प्रागैतिहासिक पुरुषहरू बसोबास गरे, २० औं शताब्दीको मध्यमा निर्माण, चट्टानहरु गिड्डी, बाँदर र सैन्य ब्याट्री शताब्दी यद्यपि यो सत्य हो कि जिब्राल्टर पन्ध्र दिन बस्नको लागि ठाउँ छैन, तपाईले दुई वा तीन दिन सूर्य, दृश्य, प्रकृति र रेष्टुरेन्टहरू र बारहरूको प्रस्तावको आनन्द लिन बिताउन सक्नुहुन्छ।
आवास? तपाईं होटल, पर्यटक भाडाको घरमा र कम पैसाको साथमा सुत्न सक्नुहुन्छ युवा छात्रावास। अधिक जानकारीको लागि आधिकारिक जिब्राल्टर पर्यटन वेबसाइट भ्रमण गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। जिब्राल्टर हेर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » जिब्राल्टर » जिब्राल्टरको रक भ्रमण गर्नुहोस्